Canchọ kandụl iji ihe eji eme ụlọ mma | Crafts Na
O doro anya na kandụl agba nwere obi ụtọ kachasị na kpochapụla nke ndị ọcha niile, mana ha nwere ike ịka mma karịa mgbe etolitere ma kpụọ ha dị ka anyị ga-ahụ ugbu a. Ọdụ kandụl ndị a mara mma nke ejiri ihe amaala ụmụ amaala na-echegharị gbanyụọ ihu ọwụwa anyanwụ nke ime ụlọ ahụ. Echeghị m na ọ bụ nnukwu ọrụ, n'eziokwu, ọ ga-eju gị anya na ịdị mfe na ọsọ nke ogbugbu. Na mgbakwunye na kandụl ahụ, were mpempe akwụkwọ dị nkọ ma ọ bụrụ na ị nwere kandụl ọcha, fesa ya na agba, nke ga-enye iji nye agba ọhụrụ n'elu.
Thegba kandụl ahụ na-acha anụnụ anụnụ, odo ma ọ bụ agba ọ bụla ị nwere, jidere ihe dị ka sentimita 30 site na ihe ndị a ga-achọ mma, na-anwa ị nweta otu edo na enweghị mmetụta. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, nye uwe nke abụọ nke agba mgbe ihe dị ka awa 3 ma ọ bụ 4 gachara nke mbụ. Hapụ ya ka ọ kọọ.
Wepu mpempe akwụkwọ na tebụl iji chebe elu ahụ n'oge usoro ọgwụgwọ. Gbaa mbọ hụ na kandụl ahụ kpọrọ nkụ kpamkpam, jiri mkpịsị aka gị metụ elu ahụ. Were kandụl mbụ na isi nke mkpa iji mee ihe siri ike. Colordị mbụ nke kandụl ahụ ga-apụta ọzọ, na -emepụta mmetụta agba mara mma. Echegbula ma ọ bụrụ na ebuteghị ihe kpatara ya, n'ihi na a na-enye mma nke ụdị ịchọ mma a site na enweghị atụ.
Cheta na a ga-eji kandụl kpuchie kandụl ahụ, na-e imitateomikwu ụdị India. Atụla egwu ị gafefe ma gosipụta echiche gị. Ọ bụrụ na ụdị ọrụ a masịrị gị, lee anya na ọrụ kandụl a ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts » Jiri kandụl chọọ ụmụ amaala mma
Mee eriri akpụkpọ anụ 2